माओबादीबाट एमाले भएका यी चारै जनाको ‘सांसद पदसँगै मन्त्री पद’ पनि चैट ! – Halkhabar kura
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार २०:०४
माओबादीबाट एमाले भएका यी चारै जनाको ‘सांसद पदसँगै मन्त्री पद’ पनि चैट !
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्तो तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरेको छ।
सो पार्टीका तर्फबाट मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको दल त्यागको पत्रअनुसार बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले सूचना पढेर सुनाएका हुन्।
सांसद् पद गुमाउनेहरुमा टोपबहादुर रायमाझी (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ), लेखराज भट्ट (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति), प्रभु साह (सहरी विकास) र गौरीशंकर चौधरी (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) छन्। उनीहरु क्रमशः अर्घाखाँची, कैलाली, रौतहट र कैलालीबाट निर्वाचित भएका थिए।
उनीहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार मन्त्री बनेकाले अहिले सांसद् पदबाट मुक्त भएपछि मन्त्री पदबाट पनि मुक्त हुने बताउँछन् अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। संविधानको धारा (९) मा भनिएको छ- ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।’
Previous बढ्दो राजनैतिक अस्थिरता र वैदेशिक हस्तक्षेप अन्यका लागि भए पनि राजसंस्था पुनस्थापित गर्नुपर्छ
Next ओली सरकारले राष्ट्रवाद देखाएर चुच्चे नक्सा पनि गायब पारिसक्यो – सांसद गजेन्द्रबहादुर महत